လစ်ဗျားနိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်း ဒါနာမြို့၌ မြေမြှုပ်မိုင်းထိ၍ အရပ်သား ရှစ်ဦး သေဆုံး - Yangon Media Group
လစ်ဗျားနိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်း ဒါနာမြို့၌ မြေမြှုပ်မိုင်းထိ၍ အရပ်သား ရှစ်ဦး သေဆုံး
ထရီပိုလီ၊ မေ ၃၁
လစ်ဗျားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဒါနာမြို့တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းထိ၍ အရပ်သားရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါမြို့အား သူပုန်များက မေလမှစ၍ သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ရာ အစိုးရစစ်တပ်က တိုက်ခိုက်လျက်ရှိ ကြောင်း စစ်ဘက်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းက မေ ၃၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ဒါနာမြို့အနောက်ဘက်ဝင် ပေါက်၌ အကြမ်းဖက်သမားတို့ ထောင်ထားသည့် မြေမြှုပ်မိုင်း ပေါက်ကွဲ၍ အရပ်သားရှစ်ဦးသေ ဆုံးခဲ့ရကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကို ပြောပြခဲ့သည်။
လောင်စာနှင့် ရိက္ခာရရှိရန်အတွက် ဒါနာမြို့မှ လူတစ်စုမှာ အခြားနေရာသို့ ထွက်ခွာကြစဉ် မြေမြှုပ်မိုင်းထိ၍ ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ ရကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ မြို့မှထွက် ခွာလာစဉ် မြူနီစီပယ်အားကစားရုံ အနီးသို့ရောက်တွင် မိုင်းဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရတပ်က ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒါနာမြို့ကို ပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ မူဂျာဟီဒင်တို့၏ ရှူရာ ကောင်စီနှင့် မဟာမိတ်အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွတို့သည် ဒါနာမြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ယခုဗုံးထောင်သူများမှာ အယ်လ်ခိုင်ဒါနောက်လိုက်များဖြစ် ကြောင်း စစ်တပ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ စစ်တပ်က ဒါနာမြို့အနီးသို့ တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်နေစဉ် မြေ မြှုပ်မိုင်းများမှာ အဟန့်အတားဖြစ်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ လစ်ဗျားကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့က ဒါနာမြို့အနီးသို့ လူသားချင်စာနာမှု အထောက်အကူများပေးရန် စစ်တပ်အား လမ်းဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤမြို့တိုက်ပွဲစကတည်းက စစ်သား ၃ဝ သေဆုံးကာ ၄ဝ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်တပ်က ပြောခဲ့သည်။
တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသုံးဦးသေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ၊ က?
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကလေး တစ်ဝက်ကျော်မှာ စစ်ဘေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ လိင် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ေ??
မြစ်ဆုံအရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုများကို ဒီချုပ် သတိထားလေ့လာနေ၊ မြစ်ဆုံဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြည်သ?
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သတိကြီးသော ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ စွမ်း
မန်ယူကွင်းလယ်လူ ဟာရီရာကိုခေါ်ယူရန် ပီအက်စ်ဂျီအသင်း သဘောတူညီမှုရရှိ၊ ဒိုင်လူကြီး၏ဆုံးဖြတ်ခ?
ဘိုကလေးတွင် လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်